आजको राशिफल / २०७६ भाद्र ०६ गते शुक्रबार - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०६, २०७६ समय: ६:१६:५०
वि.सं. २०७६ भाद्र ०६ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अगस्ट २३ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, अष्टमी व्रत, मोहरात्री, गौरा पर्व, गोरखकाली पूजा, मन्वादि, दूर्वाष्टमी, डोलेश्वर उत्सव, भाद्रपद कृष्णपक्ष (गुँलागा) अष्टमी तिथि, मध्यरात्रीपछि ०३:२० बजेसम्म, त्यसपछि नवमी तिथि, कृतिका नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि १२:०९ बजेसम्म, त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र, चन्द्रमा बृष राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), ध्रुव योग, दिउँसो ०२:२६ बजेसम्म, त्यसपछि व्याघात योग, सुरुमा बालब करण दिउँसो ०३:१८ बजेसम्म, त्यसपछि कौलव करण मध्यरात्रीपछि ०३:२० बजेसम्म, अन्तिममा तैतिल करण, आनन्दादि योग : छत्र, चन्द्रवर्ण : सेतो, चन्द्रदिशा : दक्षिण, योगिनीदिशा : ईशान, वारशूल : पश्चिम, काठमाण्डौ, नेपालमा, सूर्योदय : बिहान ०५:३७ बजे, सूर्यास्त : साँझ ०६:३४ बजे, दिनमान : ३२ घडी २२ पला (१२ घण्टा ५७ मिनेट, रात्रीमान : २७ घडी ३८ पला (११ घण्टा ०३ मिनेट)
राहु काल : बिहान १०:२८ देखि १२:०६ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो ०३:२० देखि ०४:५७ सम्म, गुलिक काल : बिहान ०७:१४ देखि ०८:५१ सम्म, रोग वारवेला : दिउँसो ०१:४३ देखि ०३:२० सम्म
शुभ वारवेला : दिउँसो १२:०६ देखि ०१:४३ सम्म, अमृत वारवेला : बिहान ०८:५१ देखि १०:२८ सम्म, आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य (दक्षिणपश्चिम) र वायव्य (उत्तरपश्चिम) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलोपिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
श्रीकृष्णयात्रा, रामेछापको चिसापानीमा हिले जात्रा, पाल्पा तानसेनमा भगवती यात्रा, नारायणी यात्रा, डोटी सिलगढीमा मष्टजाँत, विभिन्न कृष्णमन्दिरमा राधाकृष्ण रथयात्रा, ललितपुरमा भीमयात्रा, गूँगा नवमी पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
दोस्रोभावमा रहेको चन्द्रमाको मध्यमफल प्राप्त हुनेछ, साझेदार वा सहयोगीको साथ पाइने छैन, त्यसैले व्यस्त रहेर दिन व्यतीत हुनेछ । नोकरी र व्यवसायिक क्षेत्रमा आज तपाईंको बोलीको प्रतिकूल अर्थ लाग्नेछ, तर मुख छुच्चो नै देखिए पनि कुनै महत्त्वपूर्ण काम बन्नसक्छ । चेलीबेटी वा कुटुम्बपक्षसँगको सम्बन्धमा सचेत हुनु जाति हुनेछ । उमङ्ग, जोस र जाँगरलाई संयम भई प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । धातु र गरगहनाको खरिदमा महँगोमा पर्न सक्नुहुन्छ । आर्थिक पक्ष सबल भएको दिन नै देखिन्छ, दैनिक कारोबारबाट फाइदा हुनेछ । पारिवारिक र घरायसी जीवनमा देखिएका समस्याहरू सजिलै समाधान हुनेछन् । दूरदराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट सुखद समाचार आउने छ ।
आज एकाबिहानै तपाईंको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको आगमन भएको छ, अब खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ, हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुनेछ । धेरै दिनपछि आज साँझ पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जोहो हुनेछ । अध्ययन/अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति गर्ने अवसर मिल्नेछ । त्यस्तै पेसा र व्यवसायबाट समेत लाभ लिन सकिने छ । मित्र र सहयोगीले तपाईंको सहायता गर्नेछन् । तपाईंका महत्वाकाङ्क्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन् । कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिने छ । लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ । घरायसी वातावरण पनि तपाईंको पक्षमा रहनेछ । समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ ।
दिउँसोका तुलनामा बिहानको समय केही सकारात्मक देखिन्छ, तर आज द्वादश भावको चन्द्रमाको प्रभाव भएको दिन छ । सुरुमा मनमा उत्साह र उमङ्ग देखिए पनि समग्रतामा आत्मबलमा कमी देखिन सक्छ, तर शरीरमा स्फूर्ति, उत्साह र उमङ्गलाई नत्याग्नु राम्रो हुन्छ । छरछिमेकी वा साथीभाइले काममा सहयोग गर्नेछन् । अप्ठ्यारामा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्दा धन खर्च हुनेछ । शुभकार्य वा दानपुण्यमा मन आकर्षित हुनेछ । रमाइलो र सार्थक यात्राको योग छ । घरभित्रका समस्या हल गर्न आर्थिक व्ययभार बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । दिन छिप्पिंदै जाँदा तनाव र चिडचिडेपन बढ्न सक्छ । रिसराग र प्रतिशोधको भावना त्याग्नु राम्रो हुनेछ । विदेशबाट शुभ समाचार प्राप्त हुने दिन छ ।
चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुने दिन छ । विपरीतलिङ्गीसँग विनम्र भावले व्यवहार गर्दा राम्रो हुनेछ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । भाइबहिनी वा सन्ततिका कारण खुसीको वातावरण बन्नसक्छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइले तपाईंका कामधन्धामा सहयोग पुर्याउने छन् । साथीभाइको राम्रो सल्लाह र सद्भावना प्राप्त हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी बन्नु पर्नेछ र त्यसबाट प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । समाजसेवाबाट वा साथीभाइको विचारलाई अनुसरण गर्दा लाभ हुनेछ । अपूरा कार्य पूर्ण हुनेछन् । ज्ञानविज्ञान र चिन्तनमननमा समय बित्नेछ । खासगरी छात्रछात्राले कुनै नयाँ विषयको जानकारी लिने दिन हो ।
कर्मक्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आज श्रममूलक काम वा कृषिक्षेत्रका काममा मन जानेछ । तर लापरबाही गर्ने दिन होइन, जुनसुकै काममा संयम र अनुशासित भई लागीपर्नु उचित हुनेछ । आत्मविश्वासमा कमी आए पनि साथीभाइ र सहयोगीको मद्दतले सोचेजस्तै लाभ लिन सकिने छ । मातापिता वा कुनै मान्यजनको सेवासुश्रुषाका लागि खट्ने परिस्थिति बन्नसक्छ । व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने मिहिनेत र लगनशीलतामा कमी आउन दिनु हुँदैन, नत्र सानो त्रुटिका कारण काम बिग्रन सक्छ । प्राविधिक कामबाट ढिलो भए पनि सोचेजस्तो सफलता हात पर्नेछ । विद्यार्थी र ज्ञानार्जनका मार्गमा लागेकाहरूले अलि बढी मिहिनेत गर्ने समय हो । त्यस्तै बन्दव्यापारमा फाइदा नै देखिन्छ ।
भाग्यस्थानमा चन्द्रमा रहे पनि धेरै उमङ्ग र उत्साह देखाउनु राम्रो हुँदैन । मातापिताका चाहना पूरा गर्न आजको दिन अनुकूल छ । भाग्यबललाई बलियो तुल्याउन आज दिनदुःखीलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ । धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा बन्दव्यापारमा प्रभाव पर्नसक्छ, तर बेफाइदा नै हुने छैन । करकुटुम्बको आगमन हुनसक्छ । सामाजिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनसके शान्तिको अनुभूति हुनेछ । छरछिमेकी र आफन्तका बीचमा सानोतिनो वैरभावको योग छ, संयम हुँदा जीत हुनेछ । पेसाव्यवसाय र रोजगारीका मार्गमा सामान्य रहने छ, तर प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु पर्नेछ । आज जुनसुकै काममा लगनशील हुनुपर्छ, एउटै कामबाट दोहोरो लाभ लिन सक्नुहुनेछ ।
आठौं घरमा चन्द्रमा रहेको छ, सानातिना घरायसी समस्याहरू देखिन सक्छन् । आवेग र संवेगलाई नियन्त्रणमा राखी काम गर्नसके ती समस्याले तपाईंको दैनिकीमा खास फरक पार्ने परिस्थिति बन्ने छैन । जीवनसाथीसित वैचारिक मतभेद हुनसक्छ, तर अन्त्यमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ । लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका आवश्यक काम पुनः थालनी गर्न आज अनुकूल समय छ । मनमा कताकता चिन्ता र शङ्का सिर्जना भए पनि आज उत्साहमा कमी हुन दिनुहुँदैन । तपाईंको रोकिएको काम बन्न सक्छ । उपलब्धीमूलक यात्राको योग छ । गरेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुनेछ । राम्रा र प्रसन्नताका समाचारहरू सुन्न पाउनु हुनेछ । दूरगामी उन्नतिका लागि घोत्लिन सक्नुहुन्छ ।
सातौं भावको चन्द्रमाको प्रभावले मन र शरीरले आराम र रमणीयताको खोजी गर्ने दिन हो । त्यसैले कामकाजमा जाँगर चल्दैन, मन भावुक र रोमान्टिक बन्न सक्छ । कामधाममा सोचेजस्तै सफलता प्राप्त गर्न निक्कै खट्नु पर्नेछ । बन्दव्यापार र व्यवसायका अप्ठ्यारा र असजिला पक्षको चिन्तनमा एकाएक केन्द्रित हुने परिस्थिति बन्नेछ । पार्टनरसीपमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने, उपयोगी समय छैन । दाम्पत्य वा प्रेम जीवनमा पनि ठास्सठुस्स बढ्ने दिन हो । जीवनसाथी वा प्रेमी/प्रेयसीलाई समय दिनु र सकेसम्म घुमघाम र रामरमाइलोमा समय दिनु राम्रो हुन्छ । बुद्धि पुर्याउन नसके मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र र सँगीसाथी हानिकारक बन्न सक्छन्, होस राख्नुपर्छ ।
बिहान ज्ञानगुनका क्षेत्रमा मन आकर्षित भएपनि दिउँसोबाट समय अलि धमिलिएको महसुस हुनेछ । काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धीहरू हासिल हुनेछन् । छैटौं भावमा चन्द्रमा रहेकाले झैझगडा, विवाद वा तर्कवितर्कमा सरिक हुनुपर्ने समय छ । दिन छिप्पिंदै जाँदा आर्थिक सङ्कट बढ्ने समय छ, त्यस्तै मानसिक एवं शारीरिक क्षमतामा कमी भएको आभास हुनेछ, छटपटी र असन्तुष्टि बढ्ने छ । स्वास्थ्यस्थितिमा समेत सामान्य असर पर्ने दिन हो, त्यसैले खानपान र आहारविहारमा सतर्क हुनुपर्छ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा बाधा देखिंदैन, बरु अरुको भलाइ हुने पारमार्थिक काममा खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । बन्दव्यापार सामान्य रहने छ ।
आज एकाबिहानै घरभित्रको कुनै महत्वपूर्ण काममा संलग्न हुनुपर्ने देखिन्छ । चन्द्रमा पञ्चम भावमा रहने भएकाले आजबाट ज्ञानगुन र दार्शनिक विषयमा आकर्षित हुने समय छ, कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न अबको समय अनुकूल हुनेछ । आत्मबलमा बृद्धि हुनाले सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । खासगरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी स्याबासी पाउन सक्नेछन्, त्यस्ते अरुले पनि ज्ञानगुन, अध्यात्म र दर्शनका विषयमा आकर्षण देखाउने छन् । कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । भाइबहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । गृहिणीहरूले माइतीपक्षको शुभ समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ । बन्दव्यापारमा राम्रो छ ।
चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहेकाले भावुक र संवेदनशील हुने समय छ । सामान्यतया व्यापार व्यवसायबाट मिहिनेत गरेबमोजिम लाभ लिन सकिने छ । तर सानातिना पारिवारिक समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने छ । शरीरमा थकानको अनुभूति हुनसक्छ तथापि घरपरिवार, पारिवारिक सुख, मान्यजनको सेवासुश्रुषामा समय बितेको पत्तो पाउनुहुन्न । विदेश वा प्रवासमा बसेर कामधन्दा र व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो लाभ प्राप्त गर्नसक्छन् । यता घरैमा बस्नेले समेत सरलताको अनुभूति गर्नेछन् । काममा विविध चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि सफलता हासिल हुने समय छ । शरीर फुर्तिलो हुनेछ, जोस र जाँगर बढ्नाले आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ । बन्दव्यापार फस्टाउने छ ।
आत्मीयजनहरूसँग भेटघाट हुनेछ । चाहनाबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सकिने छ । मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । साथीभाइ र बन्धुबान्धवले सहयोग गर्नेछन् । यात्रा सम्पन्न र सफलतम सिद्ध हुनेछ । सामाजिक काममा दौडधूप हुनसक्छ, मान पाइने छ, राज्यपक्षबाट सम्मानित हुने अवसर मिल्नेछ । धार्मिक, सामाजिक काम वा परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च गर्ने समय आएको छ । उपहार पुरस्कार आदि मिल्नेछ । बन्दव्यापारका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आज त्यसका लागि अनुकूल समय छ । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ । विद्यार्थीहरूले सामूहिक क्रियाकलाप वा सहकार्यका माध्यमबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।